Donald Trump oo ammaanay talaabadii uu qaaday madaxweynaha Ruushka Vladamir Putin – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Donald Trump oo ammaanay talaabadii uu qaaday madaxweynaha Ruushka Vladamir Putin
Madaxweynaha la doortey ee dalka Mareykanka Donald J Trump ayaa si aan caadi ahayn u taageeray go’aanka uu qaatay madaxeynaha dalka Ruushku Vladimir Putin, kaas oo ah in aanu ka jawaabin kan Barack Obama ee dalkiisa ka ceyriyay 35 diblomaasi oo u dhashay Ruush.
War-qoraal ah uu Donald J Trump soo dhigay bartiisa Twitterka ayuu si weyn ku ammaanay talaabadda uu qaaday madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ee ahaa inuusan dalkiisa ka ceyrin diblomaasiyiin Mareykan ah, wuxuuna Mr. Trump arrinkaasi ku tilmaamay in Mr. Putin uu yahay qof caqli badan.
Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa kasoo horjeestey codsiga wasiirkiisa arrimaha dibadda oo ahaa in laga jawaabo cuna-qabataynta Obama uu kusoo rogay Ruushka, isagoo rajo ka qaba marka uu xilka la wareego Trump in xiriirka labada dal si caadi ah kusoo noqdo.
Dowladda Mareykanka ayaa ku eedeeysay Ruushka inay ka dambeeyeen faragalin lagu sameeyey doorashadii dhawaan ka dhacday dalka Mareykanka, iyadoona maamulka Obama oo arrinkaasi ka jawaabaya uu cunaqabateyn kusoo rogay Ruushka, islamarkaana dalkiisa ka ceyriyay ilaa 35 diblomaasiyiin ah.
Ugu dambeyntii, madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin ayaa sheegay inuusan marnaba musaafurin doonin diblomaasiyiinta Mareykanka ah ee ku sugan dalkiisa, isagoona tilmaamay in diblomaasiyiintaasi, caruurtooda iyo xaasaskooda lagu marti qaadi doono xaflad la qabanayo sanadka cusub ee 2017-ka.
Dhinaca kale, waxaa haatan la isweydiinayaa cawaaqib xumidda ay keeni karto in Donald Trump uu markale ammaan u jeediyo madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin, maadaama go’aanka Obama uu gaaray ay wada taageersan yihiin labada Aqal ee Mareykanka.
Si kastaba ha ahaatee, madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa arrinka uu muujiyay si weyn loo hadal haaya caalamka, iyadoona arrinkaan hadal-heyntiisa ay cirka isku sii shareertay, kadib markii Mr. Putin uu casuumaad u diray caruurta iyo xaasaska qoysaska diblomaasiyiinta Mareykanka ee ku sugan dalkiisa.
Mr. Putin ayaa dhamaan dadkaasi ku casumay inay kasoo qeyb galaan xafladda sanadka cusub ee ka dhici doona aqalka looga taliyo dalkaasi.